Save Euros Qaar ka mid ah Oo ku Qaadataa in Tareenku A Oo Travel Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Save Euros Qaar ka mid ah Oo ku Qaadataa in Tareenku A Oo Travel Europe
Save Euros Qaar ka mid ah Oo ku Qaadataa in Tareenku A Oo Travel Europe
(Last Updated On: 03/07/2020)
In ka badan la soo dhaafay 10 sano, malaayiin ayaa is tusay sida ay faa'iido u tahay in tareenka a! beeraha Rich ee Ereyada, Xeebaha dhalaalayay oo buurta sanayd Qoryaale that are never mentioned in travel brochures or blogs. Qaadashada tareenka waa madadaalo ah, haboon iyo jidka jeebka-friendly si aad u hesho ka barta A inuu caddeeyo B a, si aadan u malayn in laba jeer, tareenka!
Waxa labaad ee weyn ee ku saabsan tareenka Yurub iyo guud ahaanba waa sida ay miisaaniyaddu u noqon karto mid saaxiib ah. Ma aha oo kaliya waa waxaa aad u badan meelaha cheap uu ka soo xusho, laakiin sidoo kale siyaabo xad-dhaaf ah si ay u dhinto hoos on kharashka safarka guud. Sidaas darteed haddii aad yartay in la garaaco mararka tareenka ugu dhakhsaha badan, halkan waa tabo weyn yar in ay isticmaalaan:
Qaado Time Qaar ka mid ah si ay u samee Research iyo Qorshaynta ka hor inta aadan tareenka
Xaaladaha intooda badan marka aad qaadato tareen, waxaad samayn kartaa ugu baxay tigidhka(s) oo leh search online deg deg ah. Ballansan tigidhka ka hor haddii ay suuragal tahay. Hubi waxa waqti ee sanadka qiimaha tigidhada waa ugu hooseeya, iyo in la hubiyo in aad tahay isha ku hayaan wixii dhimis kuwa. Sida caadiga ah, dal kasta oo waxay yeelan doonaan sort qaar ka mid ah doorasho diyaar u jaban tigidh gadashada. Sidaas, sameeyo cilmi! Akhri this blog si ay u noqdaan dheeraad ah oo aqoon u leh fursadaha kala duwan.
Montpellier in Tareenadu Toulouse
Marseille si ay Tareenadu Toulouse
Markaad ku Qaadataa in Tareenku, Safarka by Night
Haddii aad tahay arday jecel safarka ama socdaal ah oo joogto ah tareenka si maalinle ah, hurdada on tareen kara jari karaa lacagta ku bixisay on hoy ku dhawaad ​​qeybtii. Waxaa sidoo kale hab cajiib ah si loo badbaadiyo waqtiga sida aad hurdo la dhaco oo isku magaalo degganaa oo toos kale. Isagoo sheegay in, waxaa muhiim ah in la fahmo noocyada kala duwan ee waafajin tareen habeenkii.
Tareenka ugu fiican yihiin in ay leeyihiin compartments. kuraasta lagu wada jiiday kartaa marka aad qaadatid tareen si ay u sameeyaan sariir oo ay la socdaan daah ah asturnaanta. Next waa couchettes, xulashada ugu qiimo jaban uguna badan. qolalka waxay leeyihiin afar ilaa lix bunks iyo waa unisex, si aad u leeyihiin si ay allabari asturnaanta yara. doorasho ee la soo dhaafay iyo ugu qaalisan waa qarsoodiga ah. Kanu waa ka fog dheeraad ah oo raaxo leh oo gaar ah, oo dhan of fursadaha wali ka raqiisan yahay qol hotel a.
Vienna si ay Tareenadu Hanover
Copenhagen in ay Tareenadu Vienna
Venice in Tareenadu Paris
Vienna si ay Tareenadu Zurich
Save oo ku saabsan Cuntada iyo Cabitaanka oo ku Qaadataa in Tareenku A
Xirxiraan cunto adiga kuu gaar ah waa by ilaa hadda habka ugu raqiisan si ay u tagaan oo ku saabsan. Ka duwan safarada joogtada ah by baska ama baabuur, marka aad qaadato tareen aad dhab ahaantii si raaxo leh ku cuni kartaa. kuraasta badankoodu waxay leeyihiin miiska ay kasoo baxeen ama miis go'an u dhaxaysa laba kursi. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay si aad iibsadaan cuntada iyo cabitaanka inta aad safarka, waa caadi. cuntada A on tareenka ma aha haday SLT oo aad inta badan ka codsan kartaa kaararka in la siiyo qiimo dhimis.
Bordeaux inay Tareenadu Nantes
Paris si ay Tareenadu Nantes
Lyon in Tareenadu Nantes
Marseilles in Tareenadu Nantes
Qorsheynta safarka ha u tareen kaa caawin kara inaad ugu dhigi baxay fund safarka aad! Helitaanka xiriir wanaagsan inta badan noqon kartaa ka jaban tahay qaadaan diyaarad, iyo dheeraad ah oo raaxo leh ka badan socdaalka baabuur. Qaado tareen waayo-aragnimo u gaar ah in xaqiiqada ah taajir ka dhigi doono fasax dhan!
Qaadataa in Tareenku A si ay u Save-A-tareenka, dooran aad u socoto iyo tareenka si ficil ahaan meel kasta ee Europe ee qiimaha ugu jaban ee suuqa! Oo, maleynayaa in waxa? Marka aad hesho tigidh tareen aad la Save A tareenka, nidaamka jaale lagu sameeyo gudahood 3 daqiiqo, sidaas darteed alaabahooda bacaha aad oo wuxuu ku raaxaysan wax kasta oo soo socota!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/take-train-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / de si / NL ama / PL iyo luuqado badan.
#nighttrain #traveleurope Talooyin safarka tareenka traveltips